MUUQAAL: Xubno ka socday S.land oo soo gaadhay duleedka Tukaraq (Daawo) | Kalshaale
MUUQAAL: Xubno ka socday S.land oo soo gaadhay duleedka Tukaraq (Daawo)
May 16, 2018 - 26 Aragtiyood
Laascaanod (Kalshaale) Xubno ka socda Somaliland oo uu Hogaaminayo Gudoomiyaha Baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax ayaa gaadhay Duleedka magaalada tukaraq oo maalintii shalay uu dagaal ku dhexmaray Ciidanka Somaliland iyo Puntland.
Waxaa halkaasi si wadajir ah Warbaahinta ugula hadlay Xubno ka tirsan Golaha Wasiirada Somaliland iyo Baashe Iyagoo guulo ka sheegtay dagaalkii shalay.
Xubnaha meesha ka hadlay oo kala ahaa Wasiirka Gaashaandhiga, Wasiirka Biyaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaan Kasoo jeeda deegaanada Sool iyo Sanaag. Waxaana dadka qaar ku sifeeyeen Booqashadooda mid shaadh kale lagu qarinayo.
weftigu tuka-raq way dhaafeen waxay joogaan fadhiisimada ciidamada somaliland ee god-qaboobe ee ay ciidanku shalay la wareegeen,,hadiyaddii ciidamada puntland siiyeen ciidanka qarankana way soo arkeen ,xataa kaarayaashii deeqda ahaa ee puntland ciidanka somaliland u keentay ,reer puntland waad ku mahadsantihiin hadiyaddaa aad ciidanka somaliland ugu deeqdeen waana idinka gudooney ,waana ku mahadsantihiin hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ciise Baldaawo clipkan
firxadki jabhada isaaq iyo horgale dayuus o u baroor diiqaya
ilamada ilmada ceshadaanu idiniri kkkkkkkkkk
adaaarabigaa rasaas kabaye kuraaxayso reenka kaaraha dhul aydaan lahayn iskaka baxa
lagawaayey qubuuraha sogala lagahelay
Baashe iyo ina koorre baa la soo diray wallee xaaladdu waa adag tahay.
Umadda muslimiinta waxaan leeyahay ramadaanul kariim. Qaasatan umadda ku hadasho afka somaliga.
Allow nawaafaji ajirka ramadaanka.
Allow wadankeena nabad nooga dhig.
Maxay tahay gudoomiye baarlamaan oo dagaal hogaaminaya away dadkii loogu talo galay.
Ma qabyaaladu ha shaqaysaa.
suldaan wuu ii soo bixi waayey klipku,,waana ku salaamay RAMADAAN MUBAARAK adiga iyo asxaabtaba
Isku wada daroo imisa dabadhilif ayaa ku dhintay dagaalkaasi saacadaha socday?
labada geessba waa dadkii Amaaxrku soo tababaray dhamaadkii qarnigii inna dhaafay.Labada dhinacba waa Eey rabaysan oo u nugul inuu shisheeyey ku shaqaysto.
Lama odhanro labada dhinacba waa dad Islaam ah,marka la eego dhaqamadooda oo ka fog ka Islaamka.
bal ii sheega inta munaafaq ee meeshaasi ku dhimatay,marka laga reebo wixii dhuloos ah oo iyagu degaanka u dhashay.
Dagaalkiii hunguriga ee qarniga socday.
Labad dhinacba maystaan dhaqaale ay ku dagaalamaan ,10 cisho oo kaliya. Petrole ma haystaan.
Saacad ayaa lays tuurturaa oo hadana waa la kala tagaa.
War heedhe maad kadeysan. Nabadu waa dahabe. Maad iska nolataan barwaaqada. Nabadda ilaahey idin siiyay xajisataan.
Maxaa wiil shalay nolaa xalay god loo hooyay. Maxaa maamo iyo caruur nabad ku nolaa maanta qaxayaan.
Somalidu marka ay nabad iyo barwaaqo helaan. Wey ku kibraan.
Maamulada baho xabashoow. Ka jooga war hooy ka jooga. War hooyo ka jooga.
Alloowyaa wax ka dhegeysto nin wax badan usoo taagnaa
ninki dhoof kuyimibay geerigu dhibaysa howshu
hakusocoto sidi logutala galay kkkkkkkkkkkkkkkk
ninki dhoof kuyimibay geeridu dhibaysa howshu
sidaad hadalka u dhigtay waa khalad waadna ogtahay cida gardaran e maad runta u sheegtid
sxb somaaliya waa qabiiloyin dowlada somaaliya ku dhisan 4,5 waad ogtahay inay qabiiloyinku
leeyihiin xuduud nin waliba deegaan leyahay kkkkkkkkkkkkk
sxb ruta cadee o isaaq waxad ku tiraahda iskaga baxa dhul aydaan lahayn haku dhimanina e
Maamulada baho xabasho waxaan dhihi lahaa mar hadaad diideen nabad galyo islaamnimo iyo soomaalinimo si fiican isu dila ka dibna kala baxa oo mar den yaan la isku soo laabanin.
Sidani waa lugooyo iyo ciyaal hurdo ka sasin.
Ragu wuu isdilaa ama wuu heshiiyaa wax u dhaxeeya waa saqajaanimo.
Mise baho xabasho saqajaanimo waa caadadeed.
Muuse biixi baa shalay iga qosliyey kulahaa dawlada fadaraalka ah ee soomaaliland ayaa na soo weerertay.
Todobaadkii horana wuxuu lahaa wax dawlad ah ma jirto oo nafleh.
Marka waxaan isqabadsiin waayey dawlad nafleh ma jirto iyo kun km bay naga soo weerertay.
Waligey qof masuuliyad saaran tahay oo ka khudbad xun ma arag.
Madaxweyne ayuu sheeganayaa hadana wuxuu leeyahay reer hebel nagu soo duulay mara wuxuu dawlad baa nagu soo duushay.
Wax iswada khilaafsan ayuu shubay.
Tvga Dowlada Puntland war bixin ka diyaariyey Jabkii Kooxda snm ee soo duushay .
Dowlada puntland inta hadheyna waxay ka dhigi doonta waxay disho iyo wax hubka laga dhigo
Meesha waxaa ka dagalamaayo waa gudoomiye baashe governo galaydh. Kuwaasu miyeey dhoof ku yimadeen?
Jawaabta aan kaa rabo maaha waa horgale kawaasi.
Maanta isaaq iyo majeerteen midna caruurtoodi meysan qixin.
Dagaalku wuxuu iskugu jiraa siyaasad iyo gurashadii gurashadii miraha federaalka hunguriga.
haka leexan runta waxan karaba inaad cadaysid meesha isaaq kudagalamayo inaanu
lahay dhulkisana kamid ahayn intaa keliya ma cadayn karta hadiikale hadalkaagu
dhinacbu kararanyahay e iskawado fikirkaaga xorbaad u tahaye
Kkkkkkk…..Muse Biixi: Dowladda Federaalkaa ee Soomaaliland….kkkkkkkkk….
Kkkkkkk…..Muse Biixi: Dowladda Federaalkaa ee Soomaaliland….kkkkkkkkk….khalkhal.com
Nabaddaa lagu asturanyahay…..
Nabadaa dhar ah….
Nabaddaa nin walba geesi ku yahay
Nabaddaa nin walba dadka ugu xoogweynyahay….
Iyadaa codkar lagu yahay…
Harkaa nabadda nin walba ha ilaaliyo….
Iyadaa nin walba deeqda…..
Haddii la diido asturnaan ma jirayso….
Wixii nabaddu asturaysay bannaankay imanayaan…..
Kuu quusqaata aftahankii Muse Biixi xilliga nabada….siduu u khalkhalay….
Dowladda Federaalka ee Soomaaliland baa na soo weerartay….kkkkkkkkkkkk…….
Waxa aftahanimaddii Muse Biixi ay eersatay waa khalkhalka colaadda….
Harkii iyo asturnaantii nabadda hallagu noqdo….haddii kale ceebo ka waaweyn baa la dhexdabaalan…..
Beebayaashii xadduudka soo xiri lahaa baa yaabay….kkkkkkkk….alloow alle…..
War alla ha qaboojiyee…..wakhtigii faankuu intii nabadda ayey ahayd….waxaagu madax dhul ka ceshaso…….
Kkkkkk….beebayaashii xudduudda soo xiri lahaa baa yaabay……intaas u dhaafi maayo….wax aad u badan baan ka ogahay dagaalka….laakiin dagaal Soomaali dhexdeedaa….ku fogaan maayo ka faallodkiisa…..waa iga hoga tusaalayn qiimaha nabadda….horana waan u diidanaa in Soomaalida dhexdeeda ay dagaasho weligay waan ka soo horjeeday……..
Waxaan ka hadlayaa waa siyaasiyiinta beenta dadka ku dagaal gelinaya oo colaadda abaabulaya…..waxaa fiicnaan lahayd inay iyagu xabbadda arkaan ee aysan wiilal masaakiin dhufays ka dhigan….
Nabadda kor baan uga faalooday….
Colaada waa ku qaawisaa..
Tabardarridaada ayey soo bandhigtaa…
Faankaagii hore ayey beenisaa…
Cilladahaaga iyo weaknesskaaga ayey ifisaa
Fulaynimadaada ayey muujisaa…
Kalsoonidarradaada iyey ifisaa…
Hugii iyo gabbaadkii….the comfort zone..ee aad ku jirtay bay kaa soo saartaa..
Waxay keentaa isku kalsooni darro iyo welwel…
Waxay keentaa dhimasho….burbur..
Waxay leedahay qoomamays dambe…
Waxay keentaa tabardarri, burbur iyo tafaaraaruq
Hallaga feejignaado halaagga aan la mahadin iyo cirib xumada aakhiro iyo adduun colaadu leedahay….
Sommaliland iyo Puntland waa Soomaali…waa deris..waa dhaqan wadaag….waa muslim…waa ehel haddii caqligu shaqaynayo….waxaa deeqa nabad iyo wada noolaansho…..sida Cali beeysteenkii…dagaal iyo shiddo ma anfacayso…..waa in siyaasiyiinta ka baacmushtaraya colaadda iyo dhiigga shacabka lala xisaabtamaa….laguna khasbaa inay dadka nabadeeyaan haddii kale ay fashilmaan….
ACWW:Soomaliyey arrin aan la yabay ayaan dagaalka ka arkaa.
Labada qolo maxay isugu duulaan ama u dagaalamayaan RAMADAANKA?Bal u fiirsada inta badan waxaa ay isku dhacaa waa bishii cibaadda.
Mida kale waxaan idiin sheegayaa labadaan reer ISAAQ VS MAJERTEEN waa labada reer ee ugu qabyaaladda badan dadka afka somaliga ku hadla,kooda sheekha ah,koobada jaamacadaha dunida wax ka dhigaa wey ka qabyaalad badan yihiin kuwooda reer miyaga ah.
Waxaan ba is dhahaa waxaa ay aaminsan yihiin diimo la yiraahdo ISAAQ iyo diinta MAJEERTEENKA.Wali ma arkin soomaali ka qabyaalad badan dhinacyo badanna marka ad fiiriso masaaibka dadka af-somaliga ku hadla waa labadaa reer illahay ha soo haddeeyo.
FG:Labada reerba dad fiican waa ku jiraan,laakiin qiyaasii intooda xun ayaa badan
ILLAHAY HAKA QABOOJIYO WAA DAD ISLAAM AHE.
Isoo waca hadii aad hub u baahantahiin iyo dawo, laakiin, waxaa shardi ah in aad dagaalka bilowdaan kahor barrito, oo aad ku kala baxdaan koontaroolkaTukaraq, plus Garoowe, amaba Tukaraq plus Burco?